ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ သားတော်လေးကို မွေးဖွားလိုက်တဲ့ မီဂန်မာကယ်လ် - For her Myanmar
Celebrity News, News>Breaking News
ဘယ်သူနဲ့ တူမလဲ မသိ… <3
“တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်းတည်းက မွေးခန်းဝင်သွားတဲ့ ကြင်ယာတော် မီဂန်မာကယ်လ်ဟာ တနင်္လာနေ့ ညနေပိုင်းမှာတော့ သားတော်လေးတစ်ပါးကို ကျန်းကျန်းမာမာမွေးဖွားခဲ့ပါပြီ” လို့ Sussexမြို့စား ဖြစ်တဲ့ မင်းသားဟယ်ရီက လူထုကို ခုလေးတင် ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
မင်းသားဟယ်ရီဟာ မွေးခန်း စဝင်ချိန်က စပြီး မွေးဖွားချိန်အထိ မီဂန်နားမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တစ်လျှောက်လုံး ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီကလေးဟာ မီဂန်နဲ့ ဟယ်ရီရဲ့ ပထမဆုံး ရင်သွေး ဖြစ်ပြီး ၇ပေါင်နဲ့ သုံးအောင်စရှိကာ အမေကော ကလေးကော ကျန်းကျန်းမာမာရှိပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကလေးနာမည်ကိုတော့ နှစ်ယောက်လုံးက ခုထိ မစဉ်းစားရသေးပါဘူးတဲ့။
Related Article >>> မီဂန်မာကယ်လ်နဲ့ သူ(မ)အမေကြားကဆက်ဆံရေး
သားတော်လေးကို ညနေ ၅ နာရီ ၂၆ မိနစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး လောလောဆယ်မှာတော့ ဘုရင်မကြီး အပါအဝင် တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးက စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် မီဂန်ရဲ့ မိခင် ဖြစ်သူ ဒိုရီယာ ရက်ဂ်လန်း ကတော့ မြေးဦးလေးမို့ အတော်လေး အချစ်တွေ ပိုပြီး အတိုင်းထက် အလွန် ပျော်နေတယ်လို့ ဆ်ိုပါတယ်။
ဟယ်ရီနဲ့ မီဂန်က မွေးဖွားခဲ့တဲ့ မင်းသားလေးဟာ ခုနှစ်ယောက်မြောက် ထီးနန်းဆက်ခံရမယ့် သူ ဖြစ်ပြီး သူ့ရှေ့မှာ အဘိုးဖြစ်သူ ချားလ်စ်၊ ဦးရီးတော်ဖြစ်သူ ဝီလျံ နဲ့ ဝီလျံရဲ့ ကလေး သုံးယောက်၊ ဖခင်ဖြစ်သူ ဟယ်ရီတို့ ရှိပါတယ်။ မင်းသားလေးဟာ ဘုရင်မကြီး အဲလိဇဘက်ရဲ့ ရှစ်ယောက်မြောက် မြစ်ကလေး လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်ဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မွေးချိန်ထက် နောက်ကျသွားတာမို့ ကလေးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မြင်တွေ့နိုင်အောင် နောက်၂ရက်အတွင်း ကြေညာချက် ထပ်ထုတ်ပေးပါမယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အက်ဒ်မင်ကတော့ ကလေးလေးက မီဂန်နဲ့ ပဲ တူမလား ဟယ်ရီနဲ့ တူမလား သိချင်နေပါပြီနော်….
Reference links: bbc telegraph.co.uk , ABC News
ဘယျသူနဲ့ တူမလဲ မသိ… <3
“တနင်ျလာနေ့ မနကျပိုငျးတညျးက မှေးခနျးဝငျသှားတဲ့ ကွငျယာတျော မီဂနျမာကယျလျဟာ တနင်ျလာနေ့ ညနပေိုငျးမှာတော့ သားတျောလေးတဈပါးကို ကနျြးကနျြးမာမာမှေးဖှားခဲ့ပါပွီ” လို့ Sussexမွို့စား ဖွဈတဲ့ မငျးသားဟယျရီက လူထုကို ခုလေးတငျ ကွညောလိုကျပါတယျ။
မငျးသားဟယျရီဟာ မှေးခနျး စဝငျခြိနျက စပွီး မှေးဖှားခြိနျအထိ မီဂနျနားမှာ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျတဈလြှောကျလုံး ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးခဲ့တဲ့ ပွညျသူတှကေို ကြေးဇူးတငျကွောငျး ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဒီကလေးဟာ မီဂနျနဲ့ ဟယျရီရဲ့ ပထမဆုံး ရငျသှေး ဖွဈပွီး ၇ပေါငျနဲ့ သုံးအောငျစရှိကာ အမကေော ကလေးကော ကနျြးကနျြးမာမာရှိပါတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ကလေးနာမညျကိုတော့ နှဈယောကျလုံးက ခုထိ မစဉျးစားရသေးပါဘူးတဲ့။
Related Article >>> မီဂနျမာကယျလျနဲ့ သူ(မ)အမကွေားကဆကျဆံရေး
သားတျောလေးကို ညနေ ၅ နာရီ ၂၆ မိနဈမှာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး လောလောဆယျမှာတော့ ဘုရငျမကွီး အပါအဝငျ တျောဝငျမိသားစုဝငျတှအေားလုံးက စိတျလှုပျရှားနကွေပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ မီဂနျရဲ့ မိခငျ ဖွဈသူ ဒိုရီယာ ရကျဂျလနျး ကတော့ မွေးဦးလေးမို့ အတျောလေး အခဈြတှေ ပိုပွီး အတိုငျးထကျ အလှနျ ပြျောနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဟယျရီနဲ့ မီဂနျက မှေးဖှားခဲ့တဲ့ မငျးသားလေးဟာ ခုနှဈယောကျမွောကျ ထီးနနျးဆကျခံရမယျ့ သူ ဖွဈပွီး သူ့ရှမှေ့ာ အဘိုးဖွဈသူ ခြားလျဈ၊ ဦးရီးတျောဖွဈသူ ဝီလြံ နဲ့ ဝီလြံရဲ့ ကလေး သုံးယောကျ၊ ဖခငျဖွဈသူ ဟယျရီတို့ ရှိပါတယျ။ မငျးသားလေးဟာ ဘုရငျမကွီး အဲလိဇဘကျရဲ့ ရှဈယောကျမွောကျ မွဈကလေး လညျး ဖွဈပါတယျ။
ကလေးငယျဟာ သတျမှတျထားတဲ့ မှေးခြိနျထကျ နောကျကသြှားတာမို့ ကလေးအခွအေနနေဲ့ ပတျသတျပွီး မွငျတှနေို့ငျအောငျ နောကျ၂ရကျအတှငျး ကွညောခကျြ ထပျထုတျပေးပါမယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
အကျဒျမငျကတော့ ကလေးလေးက မီဂနျနဲ့ ပဲ တူမလား ဟယျရီနဲ့ တူမလား သိခငျြနပေါပွီနျော….
Tags: baby, breaking news, Celebrity news, Meghan Markle, News, Royal